Xisbigeenu Ma xal baa, ma xeeraa mise waa xeelad? | SAHAN ONLINE
Xisbigeenu Ma xal baa, ma xeeraa mise waa xeelad?
Fahamka guud, xisbigu waa kulan middeeya koox ka kooban qaybaha bulshada, kuwaasoo leh hal hadaf oo fog, isuna geeyey maskaxdooda, muruqoooda iyo maalkooda. Kooxdan wuxuu mid walba oo ka mid ah leeyahay baahi u gaar ah sida aqoonsi, helid adeeg, helid dhaqaale, shaqo iyo awood ama mansab siyaasadeed heer degmo, gobol iyo qaran.
Waxaa jira sida dabiiciga ah in kooxdan ay doonayso inay wax la qaybsato ama iska reebto koox kale, waana labadaa garab inta badan saldhiga aragtiyada xisbiyadda (Hanti-goosi iyo Hanti-wadaag), kuwaasoo ku kala tiirsan dabaqadaha buslhada ee hoose, dhexe ama sare.
Bulshadeenu waxay si rasmi ah ugu kala qaybsan tahay labadaa qaybood, kuwaasoo kasoo kala askumay xisbiyadii SYL iyo PROGRESS ama Labadii kooxood ee kala aaminsanaa Siyaasadii 60-kii iyo tii 70-kii. Xilligii burburkana halkeedii ayay ka sii socotay, labadii Garab Siyaasadeed ee abuurmay waxay kala hoggaaminayey rag kala aaminsanaa fikradahaas.
Xisbiyada ku tiirsan dadka dhaqaalaha leh, Boqortooyada iyo dhaqanka ee Dabaqada Sare waxay aad u daneeyaan inay arrimuhu xakamysnaadaan. Halka xisbiyada ku tiirsan Dabaqadaha Hoose ama Dhexe ay xoogga saaraan in bulshadu xuquuqaha u sinaato.
Xilligii Burburka kala qaybsanaantaas aragti kuma koobnayn isbahaysiyada siyaasada iyo Maamulada, balse waxay si hufan hoos ugu daadegtay gudaha beelaha oo dhan, taasoo dhalisay jawi siyaasadeed oo isu dheelitiran.
Beel walba waxay lahayd laba kooxood oo uu tartan xoog leh ka dhexeeyo, taasoo muuqata marka uu wax qaybsi ka dhaco gudahooda.
Isbedelada waaweyn waxay imaan jireen marka ay timaado saamaynta isbedeladda siyaasadeed ee Soomaaliya ama amaro gaar ah ay ka yimaadaan dibedda, iyadoo Kooxba ay kooxda kale mar ka awood iyo sumcad sareyso. Culayska ugu weyna wuxuu ka jiray gudaha Beelaha oo ay muuqatay inay badankood doonayeen inuu dhaco horumar ku salaysan kororka dadka, dhaqaalaha iyo baaxda dhulka la haysto.
Labadaa Garab waxay u dhigmeen laba Xisbi, kala duwanaanshahoodu wuxuu ahaa in Xisbigii hore uu lahaa qorshe siyaasadeed fadhiya iyo taageero kooban oo aan isbedelayn, halka xisbiga dambe uu lahaa qorshe aan dhamaystirnayn iyo taageerayaal badan oo isbedeli kara.
Nasiibdarada weyn waxay tahay iyadoo taageerayaal labada dhinac ah ayan weli gaarin hadafkoodii gaarka ahaa, kuwaasoo manta u baahan in qiima gaar ah la siiyo, ka hor inta aan xoogga la saarin in lasoo jiito bulsho ka baxsan xayn daabta siyaasadeed.
Waxa aan laga fekerin ayaa ahayd in aragtida Hoggaamiyaasha keliya lagu tiirsanaado, iyadoo uunan jirin qorshe cad, hoggaamiyeyaal u diyaarsan inay sii wadaan qorshahaas iyo taageerayaal rasmi ah.
Bulshadeenu waa dad dhaqan, si wanaagssan ugama uu dhex shaqayn karo xisbi u adeegaya bulshada hoose ama dhexe. Arrintana waxay halis ku tahay in la helo Maamul si wacan u guta xilka saran.
Taariikhdii madoobayd ee bulshadeena waxay ahayd markii aan go’aansanay siyaasad ku salaysan Gobol, ka dibna la isku khilaafay wax walba oo bulsho ka dhaxeeya. Sidaas si la mid ah madaxdii nasoo martay markay isku dayeen ama sameeyeen siyaasado xulufaysi gobol waxay la kulmeen ceeb foolxun iyo kalsooni daro bulsho,
Haddaba, su’aasha isweydiinta mudan waa Xisbigeenu waa noocee? Wuxuu noqon karaa mid Xeero wax lagu cuno ah ama Xeelad lagu xil dheeraysto sidii dhacday saddex sano ka hor.
Waxaa lagama maarmaan ah in la helo xisbiyo leh hadaf siyaasadeed, shaqaale aqoon u leh iyo tasiilaad u fududeeya gudashada hawshooda.
Waxaa mar kale muuqata inuu maamulkeenu u jeestay Jihada Waqooyi Galbeed ee Xisbi Qabiileedka ama dib loogu noqday Saddexdii Gobol ee Waqooyi Bari. haddii aan la helin qorshayaal wax looga bedelayo tiradda Xisbiyada, si loo helo xisbiyo matala Sool, Sanaag iyo Gayn iyo weliba Xisbiyo yaryar oo ay bulshada qaarkeed bah wadaag kula noqon karto Xisbiyada Waaweyn midkooda guuleysta.
Ugu Dambayntii, Xalka ugu haboon waa in labo Xisbo oo keliya la sharciyeeyaa, si loo helo isu dheelitirnaan bulsho, ka qaybgal dhamaystiran iyo tartan furan. Haddii taa la waayo waa in xoogga la saaro dhismaha maamulo gobol iyo degmo awood leh, si loo xaqiijiyo jiritaanka haddii uu kala tag yimaado ama dib loogu noqdo Qaab dhismeedkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya.
C/Qaadir Muuse Yuusuf (Gentleman)